कसरी डिस्ने + | मा उपकरणहरू मेटाउने आईफोन समाचार
डिज्नी + अन्ततः यसको सम्पूर्ण क्याटलगको साथ स्पेनमा उपलब्ध छ। सुबिधा एकै साथ devices उपकरणहरूमा एकै साथ हेर्न सकिन्छ, १० यन्त्रहरूको अधिकतम सीमा जसमा सामग्री डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं त्यो सीमा पार गर्नुहुन्छ भने, तपाईं कसरी एक उपकरण हटाउनुहुन्छ ताकि तपाईं अर्को थप्न सक्नुहुन्छ? हामी तपाईंलाई यो व्याख्या गर्दछौं।
एक समान आशा केवल तब याद हुन्छ जब नेटफ्लिक्स स्पेनमा अवतरण भएको थियो, स्पेनमा भिडियो स्ट्रिमि services सेवाहरू सुरू गर्दै। युरोपमा डिज्नी + को आगमन एक वास्तविकता हो, यसको डिस्नी, पिक्सर, मार्वल, स्टार वार्स र नेशनल जियोग्राफिकको सम्पूर्ण क्याटलगको साथसाथै द सिम्पसनजस्ता अन्य श्रृंखलाहरू। प्रति महिना 6,99 69,99 per को लागि (€।। .XNUMX. यदि तपाइँ एकल वार्षिक शुल्कको लागि विकल्प लिनुहुन्छ) हामीसँग धेरै नै विस्तृत क्याटलग र चार उपकरणहरूमा एकै साथ 4K सम्मको गुणस्तरमा यसलाई हेर्नको क्षमता, 10 उपकरणहरूमा अधिकतम डाउनलोड सहित। यसको मतलव त्यहाँ स्थापनाहरूको संख्यामा कुनै सीमा छैन, तर त्यहाँ उपकरणहरू छन् जुन डाउनलोड गरिएका यन्त्रहरूमा छन्। सिद्धान्तमा यो "सामान्य" प्रयोगकर्ताहरूका लागि समस्या हुनु हुँदैन तर उनीहरू जसले आफ्नो खाता साझा गर्छन् कुनै बिन्दुमा सीमा पुग्न सक्दछ।
अर्कोमा अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्षम हुन हामी कसरी एउटा उपकरण हटाउने छौं? एप्लिकेसनबाट नै त्यहाँ कुनै विकल्प छैन जसले यसलाई अनुमति दिन्छ, न त वेब पृष्ठबाट, यति धेरै प्रयोगकर्ताहरू यसलाई गर्नका लागि मार्ग खोज्दै बौलाहा भइरहेका छन्। यो वास्तवमै एकदम सरल छ:
यदि तपाईंले उपकरणमा सामग्री डाउनलोड गर्नुभएको छ जुन तपाईं मेटाउन चाहानुहुन्छ, पहिले ती डाउनलोडहरू मेटाउनुहोस्
त्यो उपकरणबाट अनुप्रयोगको स्थापना रद्द गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले यी दुई चरणहरू अनुसरण गर्नुभयो, त्यो ठाउँ खाली हुनेछ ताकि तपाईं अर्को उपकरणमा अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। निस्सन्देह अन्य व्यक्तिसँग सेवा साझेदारी गर्ने धेरैले यो समस्या फेला पार्दछन्, जुन अर्को तर्फ केही हिडन समाधान तर गर्नको लागि एकदम सरल छ। प्लेटफर्मको सामग्रीको मजा लिनुहोस् र सम्झनुहोस्, घरमै बस.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी डिस्ने + मा उपकरणहरू मेटाउने
धेरै राम्रो समाचार! के वेब ब्राउजर उपकरणको रूपमा गणना हुनेछ?
नमस्कार, मसँग एउटा प्रश्न छ: हामी people जना मानिस हौं, प्रत्येक प्रोफाइलको साथ, डिस्ने + सदस्यता साझा गर्दै। कल्पना गर्नुहोस् कि account खाताको प्रत्येक सदस्यले २ उपकरणमा कुल १० लगेर लग-इन र डाउनलोड गरेको र सामग्री भण्डार गरेको छ। प्रश्न यो छ: के खाता ११ उपकरणबाट पहुँच गर्न सकिएन? वा सामग्री पहुँच गर्न र देख्न सकिन्छ, तर डाउनलोड र भण्डार छैन कि ११ औं उपकरणमा? धन्यवाद!
म्याकोस र आईओएसका लागि विश्वव्यापी खरीदहरू अब उपलब्ध छन्